Tuuggii Wasiirka Maaliyada Noqday (SHEEKO XIISO BADAN). | Shabakada Gabooyaha
Tuuggii Wasiirka Maaliyada Noqday (SHEEKO XIISO BADAN).
Apr 21, 2015 - jawaab
Waxaa jiri jiray sida sheekooyinka caanka ah lagu hayo, Tuug caan ahaa oo magaalo dhan hilfaha u qaaday, balse la sheegay tuugaasi inuu ahaa Tuug daacad ah.
Maalin maalmaha ka mida tuugii wuxuu go’aansaday inuu la kulmo halgamaa caan ah oo la yiraahdo Mahatma.
Mahatma ayaa Tuugii ku yiri, hal arrin ma kaa codsan karaa? Tuugii wuxuu ku jawaabay. ‘’ Haa mudane’. Wuxuu ku yiri, ‘Waxaan kaa codsanayaa waligaa inaadan been sheegin, hadaad rabtid tuugaaga ahow’. Tuuggii balantaasi wuu aqbalay. Hadalna kuma soo celin.
Tuugii daacada ahaa wuxuu yeeshay 4 nin oo ay xulufo ku noqdaan inay wax isla xadaan, waxay u dhici jireen guryaha waaweyn, bangiyada iyo wax kastoo dayacan.
Xulufada uu samaystay waxay ogaadeen in ninkani uusan been sheegin uu daacad yahay, balse waxay ku qanacsanaayeen inuusan sirtooda kashifi jirin.
Habeen habeenada ka mida tuugadii waxay dajiyeen qorshe ay ku doonayaan inay u dhacaan qasri weyn oo uu daganaa boqor saaxiib dhaw la ahaa Mahatma isla markaana ay qasnadiisa kala soo baxaan 6 kiiloo oo dahab ah ugu yaraan.
Boqorka loo tashanaayo wuxuu ahaa boqor qalbi wanaagsan oo inta badan shacabka u xukuma si cadaalada, isagoo aan la fahmeynina soo dhex gali jiray Shacabka, xantiisa ayuu magaalada kala socon jiray.
Boqorkii isagoo markaasi qasrigiisa ka soo baxay ayaa waxay iska hor yimaadeen 5-tii nin ee tuugada ahaa oo u soo socday inay qasrigiisa u dhacaan oo dahabka qasnada uga buuxa la soo baxaan.
Ragii ayuu ku yiri, ‘ War haye maxaad aheeydeen adinku? Tuugii daacada ahaa ayaa soo booday; Wuxuu ku yiri, ‘Waxaa nahay tuugadii magaalada’.
Boqorkii intuu yaabay ayuu sii weydiiyay, haye xageed u socotaan?
Tuugii daacada ahaa ayaa mar kale ku yiri, ‘Waxaan doonaynaa inaan soo xadno qasnada dahabka ee boqorku leeyahay’.
Tuugadu qofka ay la hadlayaan inuu boqorka qudhiisa yahay ma fahansana xitaa ilaalada albaabku ma yaqaanaan.
Boqorkii isagoo yaaban oo dareemay in ragani uu ku jiro tuugan daacada ah ayaa ku yiri, ‘ Bal ina keena aniga xitaa waqtigaan laga bilaabo adinkaa idinka tirsanahaye.
Lixdooda oo wada socda ayaa waxay yimaadeen albaabkii qasriga oo ilaalo badan ay joogaan, ilaaladii waxay joojiyeen ragii. Waxay ku yidhaahdeen maxaad tihiin?
Tuugii daacada ahaa yiri, ‘Waxaa nahay Tuugada magaalada’. Ninkii ilaalada ahaa waa aamini waayay, wuxuu niyada iska yiri, malaha waa madaxdii meesha oo kula kaftamaasa.
Haye xagee u socotaan buu hadana waydiiyay? Wuxuu ugu jawaabay, ‘ Waxaan doonaynaa inaan qasnada boqorka dahab kala soo baxno. Wuxuu u sii raaciyay indho adeygiisa furaha qasnada keen aan kala soo baxno dahabkaas.
Waardiyhii oo yaaban wuxuu farta ka saaray tuugii daacada ahaa oo uu la socdo boqorka qasnadiisa loo socdo!!!!!!!!!!!!!!!.
Markii qasanada ay furteen waxay kala bexeen dahabkii, qaar ka mida ragii tuugada ahaa ayaa yiri, war maad noo badisaan. Balse tuugii daacada ahaa ayaa yiri, maya ma dhacayso 6 kiloo oo kaliya ayaan ku soo tashanay ka badan maya lix tuugna waa nahay.
Intuu lixdii kiiloo soo bixiyay ayuu furihii waardiyaha u soo celiyay.
Boqorkii oo ay tuug ka dhigeen ayay hal kiilo siiyeen, boqorkii markuu ka soo tagay tuugadii ayuu iska seexday.
Waardiyihii oo raba inuu xaqiijiyo ragii u yimid inay wasiiro ahaayeen iyo in kale, wuxuu ogaaday inaysan wasiiro aheyn balse arrinta wuxuu gaarsiiyay boqorkii.
Boqorkii oo shaki ka qabi jiray wasiirkiisa maaliyada, wuxuu u xilsaaray inuu soo ogaado tirada dahabka ay kala bexeen tuugada meesha, Wasiirkii wuxuu sheegay in 2 kiloo oo kaliya ay ku jirto meesha oo tuugadu ay qaateen 10 kiiloo oo dahab ah.
Boqorkii wuxuu wasiirka siiyay fursad uu ku soo baadho ragii wax dhacay waana la soo qabtay tuugadii.
Tuugadii markii la keenay ayaa la waydiiyay inta kiloo ay qaateen, tuugii daacada ahaa ayaa ku adkaystay inay 6 kiiloo oo kaliya ay qaateen beena aysan sheegaynin arrintaasna boqorka waa dareensan yahay, wixii qasnada ku jirayna waa ogaa Balse, wasiirkii wuxuu ku adkaystay inay 10 kiilo qaateen.
Boqorkii ayaa ilaaladiisa ku amray in wasiirka gurigiisa la tago oo 4-ta kiiloo ee maqan laga soo saaro, waa laga soo helay.
Boqorkii isla markiiba wuxuu amray in wasiirka jeelka la dhigo uuna yahay tuuga dhabta ah, isla waqtigaasna wuxuu wasiirka maaliyada u magacaabay Tuugii daacada ahaa.
Dulucda sheekada: khiyaamadu beenta way ka daran tahay iyo tuuganimada.